people Nepal » काखी गन्हाउँछ ? यी हुन काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने उपाय ! काखी गन्हाउँछ ? यी हुन काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने उपाय ! – people Nepal
काखी गन्हाउँछ ? यी हुन काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने उपाय !
र्मी मौसम पनि सुरु भइसकेको छ । यो समयमा अत्यधिक पसिना आउने समस्यासँगै काखी गन्हाउने गर्छ । यो समस्याका कारण कतिपयलाई सार्वजनिक स्थल वा कार्यलयमा बस्दा समेत ठूलो समस्या पर्ने गरेको छ । तर, काखी गन्हाउँछ भन्दैमा नआत्तिनुहोस् । किनकी यसका समाधान पनि छन् । काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने उपाय यस प्रकार छन्ः